१७ जेठ - उपत्यकामा माओवादीले भएको संगठनलाई व्यवस्थित संगठीकरण गर्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम चुनावमा देखिएको हो। अर्को कुरा, सरकारमा बसेर एउटा दुईवटा राम्रा काम गर्नेबित्तिकै त्यसको फल तुरुन्तै पाइन्छ भन्ने हुँदैन। हरेक चिजको मात्रा हुन्छ, मात्राबाट गुणमा फड्को मार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रा जनताको...
आयोगको ताकत बढाउने उपाय
१४ जेठ - आयोगको दीर्घकालीन भूमिकामा संघीय संरचनामा उपयुक्त हुने खालको विविधता झल्किने खालको प्रतिनिधित्वलगायतको व्यवस्थाका साथै संरचनागत सुधार प्रत्याभूत गर्न आवश्यक छ।
जनताले सिंहदरबारका मध्यस्थ होइन, सिंहदरबारै चुनेको छ
१० जेठ - दश महिना लामो कार्यकाल पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा घोषणाका क्रममा देशबासीका नाममा गरेको विशेष सम्बोधनको पूर्णपाठः यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरुबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ। यसमा कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो। तात्कालिक र क्षणिक जीत–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन। मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय...
यी हुन् काठमाडौंका पहिलो मेयर
४ जेठ - काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन यतिखेर देशभरिकै चासोको केन्द्रमा छ। काठमाडौंको मेयर पदमा को विजयी होला भन्ने अनुमान चलिरहँदा यही नगरका पहिलो मेयर जनकमान श्रेष्ठ चाहिँ ८७ वर्षको उमेरमा टेकुस्थित घरमै आराम गरिरहेका छन्।
श्री ५ को सरकारले चाहँदैमा स्थानीय निकाय भंग हुँदैन
३ जेठ - संविधान उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच पुग्यो भन्ने लागेमा, अधिकार दुरूपयोग भयो भन्ने लागेमा, भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने लागेमा र कुनै काम हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा भंग गर्न सकिन्छ।...
मेरो महानगर सपना
२९ बैशाख - अबको काठमाडौंको सपना मेयरमा व्यक्त हुन्छ तर मेयरले मात्र केही गर्दैनन्। त्यसका लागि खुला समाजका नागरिक शक्तिहरूले मेयरलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। उसलाई यो समाजको र यो सहरको सपना देख्न लगाउनु पर्छ।
स्थानीय नेतृत्वलाई पुनःनिर्माणका चुनौती
२७ बैशाख - स्रोतको व्यवस्थापन अबको पहिलो चुनौती हुन सक्छ। किनभने अब पहिले जस्तो बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अर्को जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती हुन सक्छ। वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हुन सक्छ। सही रूपमा बजेट पुर्याउन सकिएन भने माग एकातिर र आपूर्ति अर्कोतिर हुन्छ र पुनःनिर्माण...
कमिसन खाएको प्रमाणित भए देश छाड्छु
२६ बैशाख - नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्नका लागि प्रयत्न गर्दा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भयो र म यसमा ज्यादै दुःखी छु। म नेपाली जनतासँग के अनुरोध गर्छु भने यदि यसमा हाम्रो कुनै कुनियत भेटियो भने झुण्ड्याइदिए हुन्छ हामी झुण्डिन तयार छौं। तर जानीजानी बुझीबुझी यस्तो प्रचार नगरिदिनु हुन पत्रकार साथी र आम...
यसरी समृद्ध बन्छ स्थानीय तह
२६ बैशाख - उद्योगधन्दा बन्द नगर्दा पनि राजनीति हुन्छ। अब हामी त्यस्तो राजनीतितिर जानु पर्छ। सिप भनेको प्रविधि, अनुशासन र तालिमबाटै आउने हो। सिपयुक्त जनशक्ति नेपालमा अझै कम छ। यो क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। श्रम, सीप हुँदा हुँदै पनि उत्पादनमा यान्त्रीकरण गरिएको छैन भने सोचेजस्तो उत्पादकत्व बढ्न...
कसरी बनाउने प्रतिभामैत्री गाउँ–नगर?
२५ बैशाख - विदेशमा आफ्नो उच्च क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका नेपाली प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउने गरी यतै काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्न सकेमा देशले फड्को मार्न समय लाग्दैन। विदेश जाँदा ठूलाठूला नेपाली वैज्ञानिक भेटिने तर देशमै भने यस्ता प्रतिभा टिक्नै नसक्ने कुराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। प्रतिभाशाली...
यसरी स्थानीय सरकारको अभ्यास
२३ बैशाख - धेरैलाई स्मार्ट सिटीकै विषयमा ज्ञान छैन। काठमाडौंको अव्यवस्थित पनलाई व्यवस्थित नबनाई त्यहाँ स्मार्ट सिटी बन्नै सक्दैन, हुनै सक्दैन। पोखरा अझै बिग्रिसकेको छैन भनेर हामी महानगरपालिकाको अभियानमा लागेका हौँ। यहाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउन सम्भव छ। नाराका लागि नारा दिएर यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु...
२२ बैशाख - हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनमा भइरहेको आर्थिक समुदय पश्चिमाहरूको औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भिक छलाङजस्तै हो, यसको फाइदा लिन हामीले पनि पूर्वाधारको विकास र व्यापारमार्फत् हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्छ।
उद्योगमैत्री गाउँ नगर
२१ बैशाख - जुन क्षेत्रमा जे कुराको सम्भावना छ, स्थानीय नेतृत्वले त्यसै अनुसार विकास निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। सबै ठाउँमा उद्योगको सम्भावना बराबर हुँदैन। सबै ठाउँमा जलविद्युत् तथा कृषि–उद्योगको सम्भावना पनि हुँदैन। आउने नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रमा कुन कुराको सम्भावना छ, त्यसलाई पहिचान गरेर विकास...
स्थानीय तहलाई अनुभवी र आँटी नेता
२० बैशाख - काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दिएका केहीलाई मैले राम्रैसँग चिन्छु। यी उम्मेदवारले महानगरलाई के गर्न चाहेका हुन्, मैले बुझ्न सकिनँ। केही मसँग भेट्न पनि आएका थिए, मैले उनीहरूलाई आफ्ना विचारहरू सुनाएँ। तर, उनीहरूको विचार केही थिएन। यो महानगरलाई पाँच वर्षमा उनले कस्तो बनाउन खोजेका हुन् भन्ने नै थाहा भएन।
धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ
१६ बैशाख - सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई कारण छन्। पहिलो, चीन पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ। दोस्रो, चीनको नीति स्थिर छ। स्थायित्व र विकास चीनको केन्द्रीय र स्थानीय सरकारका प्राथमिकता हुन्।
डलर खेती नराम्रो काम हो?
१४ बैशाख - कामको सट्टा रिपोर्टको कागजी घोडा कुदाउन, हिसाबकिताब गोप्य तवरमा खुसुक्क मिलाएर दाता बाहेक कसैलाई नदेखाउन र बोलीमा एउटा काममा अर्को अर्थात् दोहोरो चरित्र विकास गर्न गैससलाई यिनैले प्रशिक्षित गरेका हुन्।
१४ बैशाख - ‘उत्तर कोरियाली सरकारको मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट शासन बलियो बनाउनु हो’, कम्युनिस्ट सरकारले सपना देखाएको तर त्यो पुरा नहुँदा असन्तुष्टी बढेको निष्कर्ष सुनाउँदै किमले भने, ‘जतिबेला म स्कुलमा थिएँ, मलाई कम्युनिस्ट समाज राम्रो हुन्छ भनेर पढाइयो, तर कलेज पुग्दासम्म पनि मैले वास्तवमा त्यस्तो समाज कतै...
ओबरमा भारतको हरियो बत्तीको खाँचो
१२ बैशाख - चिनियाँ अग्रसरताको एक पेटी एक मार्ग (ओबीओआर– ओबर) अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको तयारी तीव्र हुँदै गर्दा हालसम्म चीनले विभिन्न देशका शीर्ष नेताहरुलाई निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको छ। मे १४ र १५ अर्थात् वैशाख ३१ र जेठ १ गते चीनको राजधानी बेइजिङमा हुने...
२५ चैत - हालसालैको घटना हो। एउटा सपिङ सेन्टरको बाटो भएर पैदल हिँड्दै थिएँ। भर्खरै खरिद गरेका थुप्रै सामान सम्हाल्न खोज्दै एउटा जोडी सडकपेटीतिर आउँदै गरेको देखें। सम्भवतः उनीहरूकी सानी छोरी, ऊ पनि बाबुको झोला झुण्ड्याएकै हातमा समाएर सँगै हिँड्दै थिइ। चिटिक्क लुगा लगाइदिएर हिँडाएका साना नानीहरू हेरौं हेरौं...
सरकार बनाउँछन् पार्टीले तर बजेट कर्मचारीले
१० चैत - नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्रै ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था पनि बदलियो। तर हाम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्ने ब्युरोक्रेटिक (नोकरशाही) परिपाटी भने जस्ताको तस्तै छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हामीले लेख्ने कुरा पञ्चायतमा पनि उस्तै थियो, बहुदल आएपछि पनि...